नेकपा सिन्धुपाल्चोकका नेता तथा जनप्रतिनिधिः को कता ? (सूचीसहित) – Nepal Press
नेकपा सिन्धुपाल्चोकका नेता तथा जनप्रतिनिधिः को कता ? (सूचीसहित)
२०७७ पुष ८ गते १७:०९
सिन्धुपाल्चोक । कम्युनिष्टको बर्चश्व भएको मानिने सिन्धुपाल्चोकमा पनि नेकपा विभाजनको असर परेको छ । विभिजित हुनुपूर्वको नेकपामा ७ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएको सिन्धुपाल्चोकमा नेकपाको केन्द्रीय कलहसँगै जिल्ला नेता, सांसद एवम् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि दुई समूहमा कित्ताकाट भएका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी दुबैले आफ्नो पकड मान्ने सिन्धुपाल्चोक नेकपाका १ सय ४५ जिल्ला कमिटी समस्यामध्य एमालेले ७३ र माओवादीले ७२ सदस्य भाग दिएका थिए ।
दुई संघीय सांसद दुईतिर
ओली र माधव–प्रचण्ड समूहका सिन्धुपाल्चोकका दुई सांसद एक–तिर लागेका छन् । विगतमा नेपालसित नजिक भनिएका सांसद शेरबहादुर तामाङ ओली पक्षमा लागेपछि दुबैतिर संघीय सांसदको भाग पुगेको हो ।
प्रचण्डका खास मानिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तामाङ अहिले बेग्लाबेग्लै पक्षमा उभिएका छन् । ओली सरकारकै पालामा कानुनमन्त्री भएका तामाङले क्याम्प परिवर्तन गरेसँगै सिन्धुपाल्चोकको समीकरण पनि बदलिएको छ ।
तामाङले समूह परिवर्तन गरेसँगै उनीनिकट जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कृष्णगोपाल तामाङ पनि ओली पक्षमै आएका छन् ।
तामाङसँगै संविधानसभा सदस्य डोल्मा तामाङ र तत्कालीन एमाले सिन्धुपाल्चोकका पूर्वअध्यक्ष हस्त पण्डित पनि ओली समूह नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएका छन् ।
तामाङले चुनाव जितेको क्षेत्र नम्बर २ का ५ स्थानीय तहमध्ये पाँचपोखरी थाङपाल, मेलम्ची र चौतारामा नेकपाले जितेको थियो । तामाङले गुट परिवर्तन गरेपनि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भने प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपामा नै रहेका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहमा नेता धेरै
सिन्धुपाल्चोकबाट नेकपा केन्द्रीय सदस्य भएकामध्ये शेरबहादुर तामाङबाहेक सबै प्रचण्ड–माधव समूहमा छन् । नेताहरु अमृतकुमार बोहोरा, अरुण नेपाल, कृष्णप्रसाद सापकोटा, माधव सापकोटा, युवराज दुलाल, रामप्रसाद सापकोटा र आरसी शर्मा प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
केन्द्रय सदस्य दावा तामाङ भने अझै खुलेका छैनन् । तामाङ रामबहादुर थापा बादलनिकटका हुन् ।
जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपाल र पूर्वसांसद सुवास कर्माचार्य पनि प्रचण्ड–माधव समूहमा नै छन् । कर्माचार्यलाई भने ओली समूहले आफूतिर तान्न फकाइरहेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख, को कता ?
सिन्धुपाल्चोकका १२ स्थानीय तह मध्ये तत्कालीन नेकपा एमालेले सात स्थानीय तहमा चुनाव जितेको थियो भने तत्कालीन एमाओवादी केन्द्रले एक नगरपालिकासहित दुई स्थानीय तहमा चुनाव जितेको थियो ।
हाल नेकपाको नौ स्थानीय तहमध्ये जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारयण श्रेष्ठ मात्रै नेकपाको ओली समूहमा छन् बाँकी आठ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भने प्रचण्ड–माधव समूहकै नेकपामा छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य पनि बाँडिए
बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकको तीन सिट जितेको नेकपामा अहिले दुई सदस्य प्रचण्ड–माधव समूहमा नै छन् । अरुण नेपाल र युवराज दुलाल त्यहीं रहेका छन् भने वागमती प्रदेश सदस्य सरेश नेपाल ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका केन्द्रीय सदस्यहरु
दावा तामाङ (खुल्न बाँकी)
झम्क नेपाल,जिल्ला अध्यक्ष
ओली समूहमा लागेका केन्द्रीय सदस्यहरु
स्थानीय सरकार प्रमुखः प्रचण्ड–माधव समूह
डम्बर अर्याल, मेलम्ची नगरपालिका
अमान सिं तामाङ, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
निमफुञ्जो शेर्पा, बाह्रविसे नगरपालिका
केदार क्षेत्री, बलेफी गाउँपालिका
कमल नेपाल, लिसंखुपाखर गाउँपालिका
टासी लामा, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका
भुपेन्द्र श्रेष्ठ, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका
राजकुमार पौडेल, भोटेकोशी गाउँपालिका
स्थानीय सरकार प्रमुखः ओली समूह
होमनारयण श्रेष्ठ, जुगल गाउँपालिका
प्रकाशित: २०७७ पुष ८ गते १७:०९